घरभित्रै बसेर गर्न सकिने प्रभावकारी सूर्य नमस्कार, यस्ताे छ याेगासन अभ्यास — Imandarmedia.com
घरभित्रै बसेर गर्न सकिने प्रभावकारी सूर्य नमस्कार, यस्ताे छ याेगासन अभ्यास
काठमाडौँ । देशभर अहिले जाडो याम छ । यतिबेला मर्निङ वाकमा निस्कनु त्यती अनुकुल हुँदैन, खासगरी काठमाडौंमा । चिसोमा मर्निङ वाक गर्दा फाइदा होइन बेफाइदा गर्ने चिकित्सकहरुको सुझाव छ । यस्तो बेला घरभित्रै बसेर योग गर्न सकिन्छ । यसका लागि सबैभन्दा सरल र प्रभावकारी योग हो, सूर्य नमस्कार ।
त्यस्तै सूर्य नमस्कार यस्तो योग हो, जो सजिलो छ, अत्यान्तै लाभदायक पनि । बालबच्चादेखि बुढापाकसम्मले यो योगासन अभ्यास गर्न सक्छन् । सूर्य नमस्कारमा विभिन्न १२ आसन हुन्छ । यी १२ आसन गर्दा सासको गति नियन्त्रण गर्न सक्नु सर्वोत्तम हुन्छ । सासको गति नियन्त्रणका लागि मन्त्रोच्चारण गरिन्छ । मन्त्रोच्चारणका साथ सूर्य नमस्कार गर्नु सत्प्रतिसत फाइदाजनक हुन्छ ।
सूर्यनमस्कार आसनको केही स्वास्थ्यवद्र्धक लाभ हुन्छ । जस्तो कि यसले रक्तप्रवाह सही ढंगले गराउँछ । पाचन क्रिय चुस्त रहन्छ । तौल नियन्त्रण गर्छ । शरीरमा सकारात्मक उर्जा पनि मिल्छ । एक पटक सूर्य नमस्कार गर्दा १३ दशमलव ९ प्रतिशत क्यालोरी घटाउन सकिन्छ । सूर्य नमस्कार स्वस्थ रहने सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो ।
कसरी गर्ने ? हामीले यसअघि पनि भन्यौ कि, यसको १२ आसन हुन्छ । सबैभन्दा पहिला प्रणायम हुन्छ, जसमा दुबै हात जोडेर सिधा उभिनुपर्छ । अर्थात नमस्कारको मुद्रामा । त्यसपछि आउँछ हसतोत्तानासन । यसमा हातलाई विस्तारै माथि उठाइन्छ । फेरी हस्तपदासन आउँछ, जसमा अगाडि झुकेर उभिनुपर्छ ।
कुन समयमा गर्ने ? सूर्य नमस्कारको अर्थ हो, सूर्यको शाश्वत अभिभादन गर्नु । यस व्यायमले सूर्यको उर्जा शरीरमा आउँछ । सूर्य नमस्कार भनेको सूर्यको तेजबाट उर्जा लिनु हो, त्यसैले यो आसन सही समयमा गर्नु जरुरी छ ।
योग निर्देशकलाई मान्ने हो भने, योग गर्नु एक कला हो र सूर्य नमस्कार गर्ने उपयुक्त समय प्रातःकाल हो । अर्थात सूर्योदयको समयमा । तर, त्यसो भन्दैमा सूर्योदयकै समयमा मात्र गर्नुपर्छ भन्ने चाहि होइन । यसलाई तपाई साँझको समयमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ । कतिपय मानिस विहान व्यस्त हुने भएकाले सूर्य नमस्कार गर्न भ्याउँदैनन् । उनीहरुले बिहानको समय सूर्य नमस्कार नगरेपनि दिनभरमा आफ्नो अनुकुलता मिलाएर गर्न सक्छन् । यद्यपी बिहानको समयमा गरिने सूर्य नमस्कार एकदमै प्रभावकारी मानिन्छ ।